Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Gareth Southgate Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; “Ugwu”.
Anyị Gareth Southgate Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Gareth Southgate Biography gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, nne na nna, nwunye (Alison), ụdị ndụ ya, ndụ onwe ya, ọnụ ahịa ya bara ụba, na ọtụtụ ihe na-apụ apụ banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ njikwa ya na England, mana ole na ole na -atụle Gareth Southgate's Biography, nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ Gareth Southgate nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Gareth Southgate n'ụbọchị 3rd nke Septemba 1970 na Watford, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Barbara Southgate na nna ya, Clive Southgate.
Ịmepụta ọnụ ụzọ ámá Gareth nke dị n'ebe ndịda na-egosi otú a 'posh' nwata nwoke nwere mmasị na ọrụ nta akụkọ lanarịrị njakịrị banyere imi ya ka ọ bụrụ ụzọ jikwaa obodo ya.
Dịka nwata, Southgate gara ụlọ akwụkwọ Hazelwick na Crawley, West Sussex wee gafee n'ihu gafere itoolu O-Levels.
Dị ka ọ na -enwu enwu, Gareth nwere ike ijikọ agụmakwụkwọ na egwuregwu ka ọ debanyere aha na agụmakwụkwọ Crystal Palace.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ na-egwuri egwu na mbido aka nri yana mgbe ahụ na etiti etiti. Ọ nọ n'ọnọdụ (azụ, aka ekpe) na foto nke mpaghara ya N'okpuru 12 na -ejide iko ọhụrụ ya.
Obi adịghị Southgate mma n'oge mmalite ya na Obí. Ọ gara n'ihu na football ya, na -egosi ụkpụrụ omume dị egwu.
Ọ dịtụghị anya na ọ ga -eme ya ka ọ bụrụ ọkachamara ebe enwere ọtụtụ ndị na -eto eto nwere nkà na klọb.
Agbanyeghị, Southgate nwere ọganihu site na ọgbọ dị iche iche, na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla ọ nọchiri anya ya.
Ọ dị mkpa ịchọta na ka na-anọ na Obí, Southgate bụ onye na-atụ egwu. A maara ya nke ọma maka ikike o nwere ịhazi ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ kaadị na njem ndị njem ma na-akwa emo maka oke imi ya.
Southgate ejighị n'aka na mbụ ma ọ bụrụ na ọdịnihu ya dị na football. Ọ nọrọ oge na ọfịs mgbasa ozi Croydon na ahụmịhe ọrụ mgbe ọ bụ 16, na-eme atụmatụ ịghọ onye nta akụkọ ma ọ bụrụ na ịmeghị ya na egwuregwu ọkachamara.
Otu n'ime ihe kpatara nke a bụ n'ihi ịkpa ókè site n'aka ndị otu na ndị agbụrụ ya na-akụ ya imi mgbe niile.
N’agbanyeghi nke ahụ, ọ ka nwere ezigbo agwa na ịkwanyere ugwu ugwu. O weere nhọrọ kachasị mma maka nlanarị / nkịta site na ịmalite ịkwa njakịrị ya ma nọgide na-abụ egwuregwu kacha mma na klọb.
Ma Southgate nọgidere na ya na ọrụ ọ rụrụ, onyeisi ndị isi ndị isi, Aston Villa na Middlesbrough na Premier League, na-emeri 57 maka England ma mesịa ghọọ onye njikwa England. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nwunye Gareth Southgate - Alison:
N’etiti onye njikwa na-aga nke ọma, e nwere nwanyị mara mma. Na 22nd nke June 2007, Gareth Southgate lụrụ nwunye ya bụ Alison na Chọọchị Parish nke St Nicholas, Worth, Crawley.
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ, nwa nwanyị Mia, na nwa nwoke Flynn. Southgate na -etinye oge dị ukwuu na ezinụlọ ya nke ọ na -ekwu na -eme ka ọ nwee ahụ iru ala.
Ọ naghị eso ndị egwuregwu bọọlụ arụ ọrụ n'ezie wee debe obere ndị enyi.
Ndụ Gareth Southgate nke Onwe:
Gareth Southgate nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Gareth Southgate: Iguzosi ike n'ihe, nyocha, obiọma, ịrụsi ọrụ ike ma dị irè.
Ike Gareth Southgate: Ọ na-abụkarị Onye ihere. N'ikwu nke a, ọ na-enwe nchegbu na-enweghị isi, nwere ike ịkatọ onwe ya na ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ọ nwere ike ilekwasị anya na ọrụ England ya ụbọchị niile ma enweghị oge igwu egwu.
Ihe Gareth Southgate nwere mmasị: Ọ hụrụ ụmụ anụmanụ n'anya, nri dị mma, akwụkwọ, ọdịdị na ịdị ọcha
Ihe Gareth Southgate achọghị: Rudeness, na-arịọ mgbe ụfọdụ maka enyemaka, ma na-ewere ọnọdụ etiti.
Na nchịkọta, Gareth Southgate bụ onye ga-etinye uche na obere nkọwa. Echiche miri emi nke mmadụ mere ya ka ọ bụrụ onye na-echebara ndị mmadụ echiche.
Ọ nwere ụzọ dị mkpa nke ndụ nke na-eme ka o doo anya na ọ dịghị ihe ọ bụla nwere ohere. Southgate nwere obi dị nro nke nwere ike imechi ya maka ụwa elu ma na-emeghere nwunye ya Alison na ụmụaka (Mia na Flynn) onye ọ hụrụ n'anya na obi ya dum.
Ndụ Gareth Southgate Family:
Gareth Southgate si n'agbata klas, ma na football, ọ nwere ezigbo mgbalite. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma.
Gareth Southgate Untold Biography Eziokwu - Mixgwakọta na Nwoke Ike:
Ahụmahụ Gareth Southgate nyeere ya aka ijikọta ya na ndị siri ike na football, ọkachasị Roy Keane na 1995 FA Cup na Villa Park.
Mgbe a jụrụ Roy Keane ihe mere o ji zọọ Southgate n'obi ya, ọ zara…'Ọ gbalịrị imebi ụkwụ m na egwuregwu ikpeazụ,' Keane kwuru na n'izu a, na-echeta otu egwuregwu ebe a zitere ya ka ọ zọpụ na Southgate.
N'oge ọ na-arụ ọrụ, ọ na-enwe nsogbu mgbe niile Ian Wright nke na - ebute ọgụ ugboro abụọ n'etiti ha abụọ.
Gareth Southgate Bio - Ndụ ndụ mbụ:
E nyere Southgate ọrụ mbụ ya na Middlesbrough na June 2006 mgbe Steve McClaren hapụrụ ịchịkwa England. Oge ya mere ka esemokwu dị ka ọ na-enweghị ikike ịkụzi chọrọ (nke Iwu nke UEFA Pro) iji jikwa ụlọ elu ụgbọ elu.
Ekweere ya ka ọ nọrọ ka onye njikwa, agbanyeghị, site na Premier League na Nọvemba 2006; Middlesbrough rụrụ ụka nke ọma na, n'ihi na Southgate bụ onye egwuregwu mba ụwa n'oge na -adịbeghị anya, na ya enweghị ohere ịmalite nkuzi nkuzi.
Ọ gara n'ihu mezue asambodo nkuzi ya. O di nwute, o duuru ndi otu ya ka ha wepu ya.
Na 20 Ọktoba 2009, obere oge ka mmeri 2-0 meriri Derby County, a chụpụrụ Southgate dị ka onye njikwa na Middlesbrough n'ọkwa nke anọ na Championship.
Nchụpụ a bụ arụmụka n'ihi na ọ kpọgara Boro n'ime otu ọkwa kachasị elu.
Gibson kwuru na ya ekpebiela ịhapụ izu Southgate na mbụ maka ọdịmma kasịnụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọtụtụ ndị Boro Fans gosipụtara na Gibson enweghị mmasị na ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Gareth Southgate Childhood ya na akụkọ Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.